Saddexda mas'uul ee ugu sareysa dowladda fedeeraaka ah oo wada qorshe xilka looga qaadayo xildhibaannada Baydhabo ka maqan, Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo doonay in dhammaan xerooyinka ciidamada ee magaalada Muqdisho la degiyo ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah balse u fasaxay xerada Daraawiishta ee Gaalkacyo in ay degaan dad rayid ah. Ruunkinet 19/02/07
Saddexda mas'uul ee ugu sareysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay doonayaan in xilka ka qaadaan mudanayaasha baarlamaanka ee ay fikradahooda siyaasadeed kala duwan yihiin.
Sheekh Adan Madoobe oo ah xildhibaanka ay dhawaan u doorteen guddoomiyaha baarlaanka mudanayaasha ku sugan Baydhabo ayaa sheegay in xildhibaannada ka maqan Baydhabo ee aan fasaxa ka haysan dowladda xilka laga qaado doono.
Sheekh Adan Madoobe ayaa warkiisa raaciyay mar uu la hadlayay xildhibaannada ku sugan baarlamaanka in ay jiraan beelo codsaday in loogu bedelo xildhibaano kale kuwa ka maqan Baydhabo.
Warka ayaa intaasi ku daraya in muddada saddexda billood ah ee uu madaxweynaha ku dhawaaqay xukunka deg deg ah uu madaxweynaha ku doonayo in uu ka yeelo sida uu rabo maamulka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dhanka kale, madaxweyne Yuusuf ayaa la sheegay in uu doonayo in dhammaan la dejiyo ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ah xerooyinka iyo Naadiyada ciidamada ee ku yaal magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, madaxweyne Yuusuf ayaa u ogolaaday in ay dhistaan ayna degaan dad rayid ah xerada daraawiishta ee magaalada Gaalkacyo.
Arrintan ayay dad badan u arkeen mid aan caddaalad ahayn ayadoo horey ay dad badan qabeen in hubka laga dhigaya beelo gaar ah halka beelo kalane loo ogol yahay in ay is hubeyaan si ay u xukumaan kuwa hubka laga dhigayo.